CAASIMADDII CAABUQA: Magaaladii uu kasoo bilowday Covid-19 oo laga waayey hal kiis oo karoona ah!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka CAASIMADDII CAABUQA: Magaaladii uu kasoo bilowday Covid-19 oo laga waayey hal kiis...
CAASIMADDII CAABUQA: Magaaladii uu kasoo bilowday Covid-19 oo laga waayey hal kiis oo karoona ah!!
(Wuhan) 02 Juun 2020 – Magaalada Wuhan oo ah halkii uu kasoo askumay cudurka caalamkii caloosha ku socodsiiyey ee COVID-19, ayaa laga waayey hal kiis oo karoona ah kaddib markii la dhamaystiray baaris halkaa laga bilaabay bartamihii Maajo.
Maamulka hoose ee magaalada ayaa baaris wadareedkan bilaabay Maajo 14, iyagoo baaray 9.9 milyan oo qofood, kaddib markii ay kacday cabsi ku saabsan moowjad 2-aad oo cudurka ah.
Yeelkeede, wax kiis ah oo cusub, midna Allaha ka dhigee lama helin min 14-kii Maajo ilaa 1-dii Juun oo shalaytoole ku beegnayd, marka laga reebo 300 oo kiis oo aan wax astaamo ah iyo caabuq toona lahayn, kuwaasoo aan Shiinaha looga arkin kuwo nool (active).
Waxaa baaristan Dowladda Hoose uga baxday 900 milyan oo Yuan ($126 milyan oo doollar).
Wuhan oo ah caasimadda Gobolka Hubei, ayaa gebi ahaanba la handaraabay 23-kii Jannaayo, kaasoo la qaaday 8-dii Abriil, waana magaaladii ugu horreeysey ee la handaraabo tan iyo bilowgii Covid-19.
Wuhan oo ahayd magaaladii ugu darnayd cudurkan Shiinaha oo idil ayaa waxaa ku rawaxay 4,634 oo qof, halka uu cudurku haleelay 83,022 oo qofood, guud ahaan China.
Previous article”Waxaad tihiin doqomo!” – Trump oo kulan AFLAGAADDO ah khadka ugu qabtay madaxda Maamul-goboleedyada & mid usoo jawaabey! (Dhegeyso)
Next article4 ASTAAMOOD oo adiga oo aan dhakhtar aadin aad ku garan karto inuu liito DIFAACA JIRKAAGU (Qaybtii 3-aad)